Ku dhawaad 4000 cod ayaa khasaaray oo la tuuray doorashadan. - NorSom News
Home Doorashada 2021 Ku dhawaad 4000 cod ayaa khasaaray oo la tuuray doorashadan.
Sida ay xaqiijisay heyádda doorashooyinka Norway, 3738 oo cod ayaa khasaaray doorashadii isbuucii horey kusoo gaba-gabowday Norway.. Codadkan khasaaray ayaa lagu daray qashinka, aana lagu darin codadkii la tiriyay ama laga diiwaangaliyay doorashadii lasoo dhaafay.
Sababta ugu weyn ee codadkaa loo diiwaangalin waayay, ayaa sida ay sheegtay hey ´adda doorashada dalkan Norway ah in dadka codeeyay aysan heysan dhalashada Norway, sidaas darteedna laga waayay diiwaanka dadka xaqa u leh inay codkooda dhiibtaabnc
Xigasho/kilde: Flere tusen stemmesedler havnet i søpla.
Previous articleBergen: Haweenay NAV u shaqeyso oo la dilay, qof kale oo shaqaale NAV ah oo dhaawac ah.
Next article(Daawo): Barnaamijka dhacdooyinka ee soomaalida Norway iyo dalalka kale ee Yurub.